विनाशकारी हावाहुरी : बारा र पर्सामा कहाँ कति क्षति भयो ? (हेर्नुस् तथ्यांक) - Yatra Daily
Home समाचार विनाशकारी हावाहुरी : बारा र पर्सामा कहाँ कति क्षति भयो ? (हेर्नुस्...
विनाशकारी हावाहुरी : बारा र पर्सामा कहाँ कति क्षति भयो ? (हेर्नुस् तथ्यांक)
बारा २१ चैत । आइतबार साँझ बारा र पर्सामा चलेको विनाशकारी हावाहुरीका कारण पर्सा र बारामा पुर्याएको क्षतिको सही विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
घटनामा २८ जनाको मृत्यू भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार बारामा २७ र पर्सामा १ गरी २८ जनाको ज्यान गएको हो । हावाहुरीका कारण ६७८ जना घाइते भएका छन् ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिको वडा नम्बर १२ र १८, फेटा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ६ र ७ हावाहुरीबाट बढी प्रभावित भएको छ ।
यसैगरी बाराकै प्रसौनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६, महागढीमाई नगरपालिकाको ७, देवताल गाउँपालिकाको ७, पचतौरा नगरपालिकाको ७ र २, परवानीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र सुवर्ण गाउँपालिकाका वडा १, ४, ५ र ८ मा पनि हावाहुरीबाट जनधनको क्षति पुगेको छ ।
हावाहुरीले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं १८ र २२ तथा बौदरमाई नगरपालिकाको वडा नं ४ पनि प्रभावित भएको छ ।
यस्तो छ बारामा भएको भौतिक क्षतिको विवरण
पर्सामा मात्रै १२२ वटा घरमा पूर्ण र ३८७ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । तीनवटा विद्यालय, तीनवटा उद्योग र दुईवटा मन्दिर÷मस्जिद पनि भत्किएका छन् ।
घटनामा ६७८ जना घाइतेमध्ये ४ सय ४४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । अरु २३४ घाइतेहरुको बारा, पर्सा र काठकाण्डौका विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ । उपचार खर्च प्रदेश २ र संघीय सरकारले व्यहोर्नेछ ।
Previous articleउद्योगी बाबुलाल चचानले गरे १ सय ३६ थान सोलार सेट वितरण
Next articleमधेस भवनमा गुपचुप चुरोट कारखानाको बोर्ड झुण्ड्याइयो, जनकपुरबाट राजधानी सार्ने !